Akụkọ Albert Nieto na Martech Zone |
Edemede site na Albert Nieto
Mkpụrụ osisi bụ ụlọ ọrụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi nke na -emepụta mmetụta dị oke egwu ma na -etinye aka maka ọdịnaya anya dị mkpa, na -enwe ike ịchekwa ma na -alaghachi maka ndị nkwusa kacha elu na ụdị kachasị mma. Ọnọdụ ụlọ ọrụ AI na-enye ohere ka ndị otu na-azụ ahịa sonyere ndị na-azụ ahịa n'ime ụwa ha nwere mmasị na kuki na-akwụghị ụgwọ.
Kedụ ka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi ga -esi nyere anyị aka ịkwadebe maka ọdịnihu enweghị kuki?
Google kwupụtara n'oge na-adịbeghị anya na ọ na-egbu oge atụmatụ iwepụ kuki ndị ọzọ na ihe nchọgharị Chrome ruo 2023, otu afọ gafere karịa ka o mere atụmatụ. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ọkwa ahụ nwere ike ịdị ka nloghachi azụ n'ọgụ maka nzuzo ndị ahịa, ụlọ ọrụ sara mbara na-aga n'ihu na-aga n'ihu na atụmatụ imebi ojiji nke kuki ndị ọzọ. Apple wepụtara mgbanwe na IDFA (ID maka ndị mgbasa ozi) dịka akụkụ nke mmelite iOS 14.5 ya, nke